Fadhiga Mudada Dheer Waxaa laga Qaadaa Cudurro Halis Ah – AwKutub News
Fadhiga Mudada Dheer Waxaa laga Qaadaa Cudurro Halis Ah
Leave a Comment on Fadhiga Mudada Dheer Waxaa laga Qaadaa Cudurro Halis Ah
Daraasaddan oo ay sameeyay khubaro ka tirsan Jamciyadda Mareykanka ee cudurrada Kansarka, ayaa natiijadii ka soo baxday ay sheegaysaa in dhaqaaqa yar uu keeno cudurro farabadan oo halis ah. Cilmi-baarayaashu waxey yiraahdeen “Haddii uu qofku fadhiyo 6-saacadood iyo in ka badan maalintii, khatarta ah geeridiisu waxey kor u kacaysaa 19%, marka loo eego dadka kale ee Saddex saacadood fadhiya maalintii.
Daraasaddan ayaa hoosta ka xarriiqeysa in xilliyo badan ee la fadhiyo uu keeni karo cudurro badan oo ay ka mid yihiin kansarka, cudurrada wadnaha iyo xidida dhiigga, cudurka sonkorawga, cudurrada habdhiska dhaqaaqa jirka ku dhaca, cudurrada kalyaha, sambabaha iyo kuwa beerka iyo habdhiska dheefshiidka, Alzheimer iyo is-dilka oo ku badan.
Khubaradan ayaa waxey ku talinayaan iney lagama maarmaan tahay in xilliyo nasasha ah inuu qofku qaato saacadaha uu kurisiga ku fadhiyo, xitaa shaqo jireed oo labo daqiiqo ah waxey hagaajisaa heerka kolostaroolka iyo Glucose-ka jirka, sidaas oo kale dhiig karta ayey dejisaa.
Tags: Caafimaadka cuduro
Previous Entry Maxaa loo diidaa codsiyada Farmaajo ee xallinta Khilaafaadyada?
Next Entry Maxkamad sare oo ku taallo Ingiriiska oo xukun kale ku ridday Dawladda Jabuuti